(ကမ္ဘာ မှ ပြန်ညွှန်းထားသည်)
၇.155° to the Sun's equator;
−၁၁.26064° to J2000 ecliptic
[[ကမ္ဘာ့ထုထည်|၁.08321×10၁၂ km3]] (၂.59876×10၁၁ cu mi)
၅.97237×10၂၄ kg (၁.31668×10၂၅ lb)
([[ကမ္ဘာ၏ ဒြပ်ဆွဲအား|၁ ''g'']])
၁၀၁.325 kPa (ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်အမှတ်)
ကမ္ဘာဂြိုဟ် (အင်္ဂလိပ်: Earth) သည် လူသားများ၊ တိရိစ္ဆာန်များနှင့် အပင်တို့ ရှင်သန်နေထိုင်ရာ ဂြိုဟ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ နေမှရေတွက်ပါက တတိယမြောက်ဂြိုဟ်တစ်စင်း ဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာတွင် ဂြိုဟ်ရံလတစ်စင်းသာရှိသည်။ ကမ္ဘာသည် နေကို ၃၆၅..၂၅၆၄ ရက်တွင် တစ်ကြိမ် လှည့်ပတ်နေပြီး တစ်နှစ်ဟုသတ်မှတ်ကြသည်။ ရေဒီယို မက်ထရစ်ရက်စွဲအရ ကမ္ဘာသည် သက်တမ်းအားဖြင့် နှစ်ပေါင်း ၄.၅၄ ဘီလီယံ အကြာက ဖွဲ့သည်းခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ နေသည် ကမ္ဘာကို ထွန်းလင်းရန် အလင်းရောင်နှင့် အပူချိန်ကိုပေးသည်။ ကမ္ဘာသည် ရေပါဝင်မှု ၇၁% နှင့် ကုန်းမြေ ၂၉% ခန့်ရှိသည်။ နေအဖွဲ့အစည်းအတွင်း သက်ရှိနေထိုင်နိုင်သော တစ်ခုတည်းသော ဂြိုဟ်ဖြစ်သည်။ သက်ရှိမျိုးစိတ်ပေါင်း ၁၀-၁၄ မီလီယံခန့် နေထိုင်ကြပြီး လူသားမျိုးနွယ်တို့မှာ အရေအတွက်အားဖြင့် ၇.၃ ဘီလီယံခန့်ဖြစ်သည်။ အနီးရှိ ကြာသပတေးဂြိုဟ်၏ ပြင်းထန်သော ဒြပ်ဆွဲငင်အားကြောင့် ဥက္ကာပျံများ၏ တိုက်မိနိုင်ချေမှ အတန်အသင့်အကာအကွယ် ရနေသည်ဟု ယူဆထားသည်။ ကမ္ဘာ ဖွဲ့တည်ပြီး ပထမ ဘီလီယံနှစ်များတွင် သက်ရှိဇီဝသည် ပင်လယ်သမုဒ္ဒရာ၌ စတင်ရှင်သန်ခဲ့ပြီး ကမ္ဘာ့လေထုနှင့် ကုန်းမြေများကို အကျိုးသက်ရောက်ခဲ့ကာ လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း ၄.၁ ဘီလီယံမှစ၍ သက်ရှိတို့ ရှင်သန်ပေါက်ဖွားခဲ့ဟန် ရှိသည်။ ကမ္ဘာမြေ၏သမိုင်းတွင် မျိုးတုန်းမှုဖြစ်ရပ်များကြောင့် သက်ရှိမျိုးစိပ် ၉၉ ရာခိုင်နှုန်း ပျက်စီးပျောက်ကွယ်ခဲ့ဖူးသည်။ ယနေ့တိုင် တည်ရှိသော ခန့်မှန်းခြေ မျိုးစိပ်များမှာ ကျယ်ပြန့်လှကာ မျိုးစိပ်အများစုကို ဖော်ပြထားခြင်း မရှိသေးပေ။
၃ ယေဘုယျ အချက်အလက်များ
၃.၁ ကမ္ဘာမြေကြီး အပေါ်ယံ အခွံပိုင်း ဖွဲ့စည်းမှု
နေအဖွဲ့အစည်းရှိ သက်တမ်းအရင့်ဆုံးပစ္စည်းမှာ လွန်ခဲ့သော ၄.၅၆၇၂±၀.၀၀၀၆ ဘီလီယံနှစ်အကြာက ဖြစ်သည်။ သီအိုရီအရ ကမ္ဘာသည် နေပေါက်ဖွားပြီး ယင်း၏အစိတ်အပိုင်းများမှ ဖွဲ့တည်ခြင်းဖြစ်သည်။
ကမ္ဘာ၏ အနာဂါတ်သည် နေနှင့် တိုက်ရိုက် သက်ဆိုင်လျက်ရှိသည်။ နောင်နှစ်ပေါင်း ၁.၁ ဘီလီယံကြာသော် နေ၏ တောက်ပမှုသည် ယခုလက်ရှိထက် ၁၀ ရာခိုင်နှုန်း၊ နှစ်ပေါင်း ၃.၅ ကြာပါက ၄၀ ရာခိုင်နှုန်းသို့ တိုးလာမည်ဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာ့မျက်နှာပြင် အပူချိန် တိုးပွားလာပြီး အင်အော်ဂဲနစ် ကာဗွန်သံသရာကို အရှိန်တင်စေကာ ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ် စုစည်းမှုစနစ်ကို လျှော့ကျစေမည်ဖြစ်သည်။ ယင်းကဲ့သို့ဖြစ်ပါက နှစ်ပေါင်း ၅၀၀ မှ ၉၀၀ မီလီယံအတွင်း အပင်များအတွက် ဖိုတိုဆင်သစ်ဆစ်နည်းဖြင့် အစာချက်လုပ်ရန် မဖြစ်နိုင်တောပေ။ အပင်များ နည်းပါးလာပြီး လေထုရှိ အောက်ဆီဂျင် ပမာဏလည်း နည်းပါးသွားမည်ဖြစ်သည်။ နောက်ထပ် ၁ ဘီလီယံနှစ်ကြာသော် မြေမျက်နှာပြင်ရှိ ရေအားလုံး ပျောက်ကွယ်သွားပြီး ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ အပူချိန်သည် ၇၀ °C (၁၅၈ °F) သို့ ရောက်ရှိမည်ဖြစ်သည်။ ယင်းအချိန်မှစ၍ ကမ္ဘာသည် နှစ်ပေါင်း ၅၀၀ မီလီယံခန့် သက်ရှိများ ရှင်သန်နိုင်သေးသည်ဟု ခန့်မှန်းထားသည်။ အကယ်၍ လေထုမှ နိုက်ထရိုဂျင်အား ဖယ်ထုတ်လိုက်ပါက ၂.၃ ဘီလီယံနှစ်ခန့် သက်ရှိများ နေထိုင်နိုင်ကောင်းသည်။ နေသည် တည်ငြိမ်ခဲ့မည်ဟု ယူဆမည်ဆိုပါသော်လည်း နှစ်ပေါင်း ၁ ဘီလီယံအတွင်း ခေတ်သစ်သမုဒ္ဒရာများမှ ၂၇ ရာခိုင်နှုန်းသော ရေထုတို့သည် ကမ္ဘာ့အတွင်းပိုင်းအလွှာသို့ ဆင်းသက်ကုန်မည်ဖြစ်သည်။
ကမ္ဘာမြေကြီး အပေါ်ယံ အခွံပိုင်း ဖွဲ့စည်းမှု
အောက်ဆီဂျင် - ၄၆.၆ %
ဆီလီကွန် - ၂၇.၇၂ %
အလူမီနီယံ - ၈.၁၃ %
သံ - ၅.၀%
ကယ်လ်စီယမ် - ၃.၆၃ %
ဆိုဒီယမ် - ၂.၈၃ %
ပိုတက်ဆီယမ် - ၂.၅၉ %
မက်ဂနီဆီယမ် - ၂.၀၉ %
အခြားဒြပ်စင် - ၁.၄၁ % 
↑ ၃.၀ ၃.၁ ၃.၂ ၃.၃ ၃.၄ ၃.၅ ၃.၆ ၃.၇ ၃.၈ Earth Fact Sheet။ NASA (2004-09-01)။ 2010-08-09 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ (2000) Allen's Astrophysical Quantities. Springer, 294. ISBN 0-387-98746-0. Retrieved on 2011-03-13.
↑ Various (2000). in David R. Lide: Handbook of Chemistry and Physics, 81st, CRC. ISBN 0-8493-0481-4.
↑ Selected Astronomical Constants, 2011။ The Astronomical Almanac။ Archived from the original on 2013-08-26။ 2011-02-25 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ (1995) "Geoid, Topography and Distribution of Landforms", in Ahrens, Thomas J: Global Earth Physics: A Handbook of Physical Constants. Washington, DC: American Geophysical Union. ISBN 0-87590-851-9.
↑ "Surface area of our planet covered by oceans and continents.(Table 8o-1)" (2006-02-02). University of British Columbia, Okanagan. Retrieved on 2007-11-26.
↑ The international system of units (SI), 2008, United States Department of Commerce, National Institute of Standards and Technology Special Publication 330, 52.
↑ (2000) Allen's Astrophysical Quantities. Springer, 296. ISBN 0-387-98746-0. Retrieved on 2010-08-17.
↑ (2000) in Arthur N. Cox: Allen's Astrophysical Quantities, 4th, New York: AIP Press, 244. ISBN 0-387-98746-0. Retrieved on 2010-08-17.
↑ Age of the Earth။ U.S. Geological Survey (1997)။ Archived from the original on 23 December 2005။ 2006-01-10 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၂၆.၀ ၂၆.၁ (1 January 2012) "Biodiversity and Evolution", Environmental Science. Cengage Learning, 62. ISBN 1-133-70787-4. Retrieved on 27 December 2014. ကိုးကား အမှား - Invalid <ref> tag; name "MillerSpoolman2012" defined multiple times with different content
↑ (31 December 1996) The Biology of Rarity: Causes and consequences of rare—common differences, 110. ISBN 978-0412633805. Retrieved on 26 May 2015.
↑ Stearns, Beverly Peterson (2000). Watching, from the Edge of Extinction. Yale University Press, preface x. ISBN 978-0-300-08469-6. Retrieved on 30 May 2017.
↑ Freeze, Fry or Dry: How Long Has the Earth Got? (25 February 2000)။ Archived from the original on5June 2009။
↑ ၃၈.၀ ၃၈.၁ (2002) The Life and Death of Planet Earth: How the New Science of Astrobiology Charts the Ultimate Fate of Our World. New York: Times Books, Henry Holt and Company. ISBN 0-8050-6781-7.
↑ တင်စိန်(ပထဝီဝင်)၏ ကမ္ဘာ့ရေးရာ အချက်အလက် အဘိဓာန်
"https://my.bywiki.com/w/index.php?title=ကမ္ဘာဂြိုဟ်&oldid=408578" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၂၄ ဇွန် ၂၀၁၈၊ ၀၈:၃၀ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။